UBooth ufuna izimpendulo ngomnikelo ka-$10m | News24
UBooth ufuna izimpendulo ngomnikelo ka-$10m
Cape Town – Udaba lwenkohlakalo olukhungethe iFIFA kulezi zinsuku kanjalo nemali engu-$10m okuthiwa yakhokhwa yiSAFA selukhulumise noMatthew Booth njengoba ethi ufuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ngemali yeWorld Cup Legacy Trust.
Kuningi osekukhulunyiwe ngemali eyakhokhelwa uJack Warner ngaphansi kweDiaspora Legacy Programme kodwa uBooth ufuna ukwazi ukuthi imali eyangena ngeNdebe yoMhlaba yasetshenziswa kuphi ngoba kwakumele kuthuthukiswe ngayo ibhola emazingeni aphansi
“Ngisho nangaphambi kweWorld Cup izinto zazibheda,” usho kanje kwabeSport24.
“Ngemuva kweWorld Cup ngangilangazelele ukubona iLegacy Trust isetshenziswa emazingeni aphasni, kodwa lokhu akuzange kwenzeke.”
Funda nalolu daba: UMahlangu ulangazelele oweBafana neGambia
“Yilokhu okungidumaza kakhulu mina.”
“Okukhulu kakhulu ukuthi u-$10m waphiwa iCONCACAF.”
“Amadodana ami amabili, athanda kakhulu ibhola lezinyawo kanjalo nezinye izingane eziningi, kodwa ngeke ziyibone leyo mali.”
Uthi usalindele ukubona ukuthi kwenzakalani ngale mali ngoba kuncane kakhulu asakubonile yena.